PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-04-15 - SIZIPHOLELE: Ukhule enamahloni ngenxa yokugconwa LUCKY CAIN
SIZIPHOLELE: Ukhule enamahloni ngenxa yokugconwa LUCKY CAIN
Ilanga langeSonto - 2018-04-15 - Ezikaqedisizungu - lucky.cain@ilanganews.co.za
ISIBONGO sakwamarawa singesinye sezibongo ezingandile kodwa ezaziwayo eningizimu Afrika. Kubantu balesi sibongo abavelele yizelamani urobert Marawa ongumethuli wezinhlelo zemidlalo kumabonakude, ugugu Marawa ongesinye sezikhulu zebhola likanobhutshuzwayo kuleli, bese kuba nesiphalaphala uvanessa yena ozakhele udumo ngokumodela, ukwethula izinhlelo zikamabonakude ezahlukene futhi ongumsakazi wesiteshi esikhombisa ukukhula ivuma FM.
Uvanessa uzakhele udumo ngesikhathi eba ngowokuqala ukudla umhlanganiso ohlelweni isurvivor South Africa: Panama.
Ngibe nenhlanhla ngesikhathi ngihlangana naye ohambeni obeluhlelwe yitourism KZN ngokubambisana nedurban Tourism, obeluya ehowick nasemgungundlovu, lapho bekuvakashiswe khona abalingisi bomdlalo kamabonakude ozoqala maduze, Imbewu.
Le ntokazi ishaya ngephimbo okungathi uma ubheke eceleni ucabange ukuthi ngelowesilisa kanti cha yisiphalaphala sentokazi.
Kulolu hambo ngibe nethuba lokuxoxa naye sase sihlela ukuba sibe nethuba elithe xaxa, sizipholele nje ukuze abafundi bethu bamazi kangcono.
Akubanga-ke wumzukuzuku ukuhlela umhlangano wethu, kube yinto esheshe yenzeka. Sihlanganele kwelinye lamahhotela emorningside, ethekwini.
Le ntokazi ethi ikhule ibizwa ngompho ifike izimisele, ivule isihluthu sayo. Engikuqaphelile wukuthi uvanessa ungumuntu onokuzethemba - lokho kubonakala ngisho ehamba nje. Ngibonile futhi ukuthi nokumodela yinto esegazini.
Echaza ngemvelaphi yakhe uthi nakuba ehlale ezindaweni ezahlukene kodwa uzalelwe enkandla, Kwazulu-natal.
“Ekhaya sihlale ezindaweni ezahlukene njengoba sike sahlala nasefort Louis kodwa manje ekhaya yisela Lucia, ethekwini,” kusho yena.
Uthi ngesikhathi efunda amabanga aphansi, uchithe isikhathi esiningi ehlala ngaphakathi esikoleni. Lokho kumenze waqhelelana nezingane zakwabo, yena ongowokugcina kuzo.
“Bengazi ukuthi nginodadewethu nomfowethu kodwa ngenxa yokuthi bebekhulile kunami nabo befunda kwezinye izikole lokho kuvule igebe (phakathi kwethu), njengoba besihlangana kakhulu uma kuvalwe izikole.”
UBEGCONWA NGEPHIMBO LAKHE
Uthi esefunda esikoleni samabanga aphakeme ezinye izingane bezihlale zimgcona ngephimbo lakhe nangobude.
“Ngesikhathi kusaqala kwakungiphatha kabi kodwa ngokuhamba kwesikhathi kugcine kungasadikizi nqulu. Bebengibiza ngoboy George, abanye bangibize ngendlulamithi,” esho ehleka kuvela uthotho lwamazinyo.
Uthi lokhu kumenze waba namahloni futhi walahlekelwa nawukuzethemba. Uqhuba athi kuthe esefunda u-grade 8 unina wambhalisa kwesinye isikhungo esifundisa ukumodela. Unina ukwenze lokho yena engazi futhi engafuni.
“Ngikhumbula ngosuku lokuqala kumele ngiye kulesi sikhungo nganyamalala ekhaya nokuthe umama uma engithola wangihambisa ngenkani,” esho ehleka.
“Kusukela lapho angibange ngisabheka emuva ekumodeleni nakuba kungabanga wukumodelela unobuhle kodwa bengikhangisa ngezimpahla nangezinto zokugcoba,” kusho le ntokazi.
Uphothule umatikuletsheni wadlulela ewitwatersrand University, wenza khona izifundo zobumeli angaziphothulanga. “Ngenxa yokuthi ngiqede isikole sengivele ngimodela, sengisesikhungweni semfundo ephakeme ngiqale ngathola imisebenzi eminingi yokukhangisa ngagcina ngishiya kungakapheli nonyaka,” kusho yena.
Uthi ngenxa yokujwayela ukwenza izikhangiso zikamabonakude ugcine eseba nentshisekelo yokungena kumabonakude.
“Ngibe nenhlanhla yokuthi ngalesi sikhathi isizini yokuqala yeSurvivor ibiza kuleli, ngabe sengibhalisa nakuba bengingazitsheli ukuthi ngizothathwa kodwa ngibe nenhlanhla ngathathwa,” kuqhuba yena engeza ngokuthi ufunde lukhulu ngokuba yingxenye yalolu hlelo.
“Phakathi kwezinto engizifundile wukukwazi ukuzimela nokuthembela kimina (uqobo) nasemibonweni yami,” esho.
Uthi ubengakaze azicabange engena emsakazweni njengoba kungabaphathi bevuma FM abamcela ukuba ajoyine lo msakazo.
Ngesikhathi eqala kulo msakazo uvanessa uthi ubeshayela uhlelo lwasekuseni nofelix Hlophe kodwa awuphelanga unyaka bendawonye.
“Ngishiyile kulo msakazo kwathi ngokuhamba kwesikhathi bangibiza futhi - bangitshela ukuthi ngizoba nohlelo lwami nokuyinto engethusile kakhulu kwazise bengikaze ngisakaze ngedwa phambili,” kusho uvanessa oshayela uhlelo itill Noon With Vanessa, olungena phakathi kwehora le-9 kuya kwele-12 emini phakathi nezinsuku.
Uthi akuthandayo ngohlelo lwakhe wukuthi lungalalelwa yinoma ngubani njengoba lunezigaba ezahlukene. Uhlelo lukavanessa luqokiwe emncintisweni weLiberty Radio Awards obuyizolo ngomgqibelo (silobe ingakaphumi imiphumela).
Uzwakalise ukujabula ngokuqokwa kwakhe njengoba eveze ukuthi ukuqokwa nje kukodwa kulo mncintiswano kusho lukhulu kuyena.
Uthi ngaphambi kokuqala ukusakaza ucele umfowabo urobert amchushise ngalo mkhakha. “Ungitshele ukuthi emsakazweni umlaleli ungubasi ngakho kumele ngimhloniphe ngasosonke isikhathi,” kulanda yena.
Uvanessa uthi into ayithanda ngomfowabo wukuthi uyamnikeza ithuba lokuziphilela impilo yakhe ngaphandle kokugxambukela.
Engxoxweni yethu akafunanga ukuphumela obala ngezithinta ezothando kodwa ukuvezile ukuthi akashadile futhi akanayo ingane.
Uqhube wathi usanda kusungula inkampani yakhe ezogxila kwezokuxhumana futhi yenze nemicimbi.
IISTHOMBE YI: TWITTER
UYINTOKAZI ezethembayo uvanessa Marawa.
KUVELA uthotho lwamazinyo uma uvanessa Marawa emoyizela kanti uqale ukwenza izikhangiso zikamabonakude esemncane.
UVANESSA Marawa uthathwe nompumelelo Bhulose ngesikhathi bekhishwe itourism KZN ngokubambisana nedurban Tourism.
UVANESSA Marawa nabanye ozakwabo asakaza nabo kwivuma FM okubalwa kubo umakhosi Khoza nolinda Ndimande.